INDLELA YOKUCHWETHEZA ABALINGANISWA NGEEACCENTS KWIWINDOWS - ITHAMBILE
Indlela yokuChwetheza abalinganiswa ngeeAccents kwiWindows
Kunzima ukuthelekelela ubomi ngaphandle kwebhodibhodi yanamhlanje xa konke ukuchwetheza kwenziwa ngumbhali wamandulo onengxolo. Ngexesha, ngelixa ubeko lwasekuqaleni lwebhodi yezitshixo luhlala lunye, ukusebenza kunye nokusetyenziswa kuye kwaqhubela phambili kakhulu. Ngaphandle kophuculo olukhulu oluvela kumatshini wokubhala oqhelekileyo, ikhibhodi ayigqibelelanga. Inye into ephambili ebinqabile ixesha elide kakhulu kukukwazi ukuthayipha ngee-accents. Ukuba unqwenela ukwenza ikhibhodi yakho ibe luncedo ngakumbi kunye neenkcubeko ezininzi, nantsi inqaku lokukunceda uqonde Indlela yokuchwetheza abalinganiswa ngee-accents ku Windows 10
Iwindows 10 iphepha lesikrini esiblowu_fault_in_nonpaged_area
Kutheni le nto kufuneka ndichwetheze ngeeakhawunti?
Indlela yoku-1: Sebenzisa iindlela ezimfutshane zokuchwetheza ngeeAcents
Indlela yesi-2: Sebenzisa iSoftware yeMephu yoBuntu kwi Windows 10
Indlela yesi-3: Sebenzisa ikhibhodi yokuChukumisa yeWindows
Indlela yesi-4: Sebenzisa iiMpawu ezivela kwiLizwi likaMicrosoft kuChwetheza abalinganiswa abaneeAccents
Indlela yesi-5: Sebenzisa iikhowudi ze-ASCII kuChwetheza iiAcents kwiWindows
Nangona zingekho kakhulu, ii-accents ziyinxalenye ebalulekileyo kulwimi lwesiNgesi. Kukho amagama athile afuna ukugxininisa ukugxininisa abalinganiswa babo kunye nokunika intsingiselo kwigama . Esi sidingo sokugxininisa siphezulu kwiilwimi ezivela kwisiLatin ezinje ngesiFrentshi kunye neSpanish ezisebenzisa oonobumba besiNgesi kodwa zixhomekeke kakhulu kwiimpawu zokumahlula amagama. Ngelixa ikhibhodi inezithuba ezahlukileyo zabalinganiswa, iiWindows azikhange zingakhathali ngokupheleleyo kwimfuno ye-accents kwi-PC.
Ikhibhodi yeWindows ineendlela ezimfutshane ezilungiselelwe zonke iindlela eziphambili ezisebenza ngokugqibeleleyo kuzo zonke iiMicrosoft application. Nazi ii-accents ezimbalwa ezithandwayo kunye neendlela ezimfutshane zekhibhodi:
Isandi sengcwaba, okt, à, è, ì, ò, ù, indlela emfutshane yile: Ctrl + `(ingcaciso yengcwaba), ileta
Isicatshulwa esibukhali, oko kukuthi, á, é, í, ó, ú, ý, indlela emfutshane yile: Ctrl + ‘(apostrophe), unobumba
Isishwankathelo se-circumflex, okt, â, ê, î, ô, û, indlela emfutshane yile: Ctrl + Shift + ^ (caret), ileta
Ngokwe-tilde accent, okt, ã, ñ, õ, indlela emfutshane yile: Ctrl + Shift + ~ (tilde), unobumba
Isichazi se-umlaut, okt, ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, indlela emfutshane yile: Ctrl + Shift +: (colon), ileta
Unokufumana uluhlu olupheleleyo lwezi zinto zikwiwebhusayithi esemthethweni yeMicrosoft Apha .
Imephu yoBuntu beWindows yingqokelela ebanzi yabo bonke abalinganiswa abanokufuneka kwisiqwenga sokubhaliweyo. Ngemephu yomlinganiswa, unokukopa unobumba ofakelwe amagama kunye nokuncamathisela kwisicatshulwa sakho.
1. Kwibar yokukhangela ecaleni kweMenyu yokuQala, khangela 'imephu yomlinganiswa' kwaye OKANYE usiba isicelo.
windows 10 ikhaya likhubaze uhlaziyo oluzenzekelayo ngo-2018
2. Insiza iya kuvula kwiwindow encinci kwaye iqulethe zonke iimpawu onokucinga ngazo.
3. Skrolela kuluhlu kwaye cofa kwi uphawu ubukhangela Nje ukuba umlinganiswa uphakanyisiwe, Cofa kuKhetha ukhetho emazantsi ukuyongeza kwibhokisi yokubhaliweyo.
4. Ngonobumba onegama elinophawu olufakwa kwizicatshulwa cofa ku 'Khuphela' ukugcina uphawu okanye abalinganiswa kwibhodi yakho yokunamathisela.
5. Vula indawo oyifunayo uze Cinezela Ctrl + V ukuphumelela Chwetheza ii-accents kwikhibhodi yeWindows.
Ikhibhodi yokuchukumisa yeWindows yenza ikhibhodi ebonakalayo kwiscreen sakho, enikezela ngeendlela ezininzi kunebhodi yezitshixo yehardware. Nantsi indlela onokuthi usebenze ngayo kwaye uchwetheze oonobumba abagqityiweyo ngebhodi yezitshixo yeWindows.
1. Cofa ekunene kwisithuba esingenanto kwibar yomsebenzi emazantsi kwesikrini sakho, nakukhetho oluvelayo, yenza iqhosha lokubonisa iqhosha lokuchukumisa ukhetho.
2. A isimboli encinci emile ngekhibhodi izakuvela kwikona esezantsi ekunene kwebar yomsebenzi; Cofa kuyo ukuvula ikhibhodi yokuchukumisa.
ayinakho ukuqhagamshela kumshicileli windows 10
3. Nje ukuba ikhibhodi ibonakale, Cofa uze ubambe imouse yakho koonobumba ufuna ukongeza isandi ku. Ibhodi yezitshixo iya kutyhila bonke oonobumba abalinganiswa abanxulumene nonobumba abakuvumela ukuba ubathayiphe ngokulula.
4. Khetha ugxininiso olukhethileyo, kwaye iziphumo ziya kubonakala kwikhibhodi yakho.
Funda kwakhona: Iindlela ezi-4 zokufaka uphawu lweDigri kwiMicrosoft Word
Ifana nesoftware yeMephu yoBuntu, iLizwi linokudityaniswa kweesimboli kunye neempawu ezikhethekileyo. Ungafikelela koku ukusuka kwicandelo lokufaka lesicelo.
1. Vula iLizwi, nakwibar yomsebenzi ngaphezulu, khetha i Iphaneli yokufaka.
2. Kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini sakho, Cofa kwi 'Uphawu' option kunye khetha Iimpawu ezingaphezulu.
Uluhlu olupheleleyo lwazo zonke iisimboli ezamkelwa nguMicrosoft luya kuvela kwiwindow encinci. Ukusuka apha, Khetha i-alfabhethi egxininisiweyo ufuna ukongeza kunye Cofa kuFaka.
le app ingavula
Umlinganiswa uya kuvela kuxwebhu lwakho.
Phawula: Apha, unokusebenzisa inqaku elingalunganga lokuchaza amagama athile anokutshintsha ngokuzenzekelayo kwiinguqulelo zawo xa uwatayite. Ukongeza, unokutshintsha indlela emfutshane enikezelweyo yesithethi kwaye ufake eyona ilungele wena.
Mhlawumbi eyona ilula kodwa eyona ndlela inzima yokuchwetheza oonobumba abanee-aksenti kwiWindows PC kukusebenzisa iikhowudi ze-ASCII zomlinganiswa ngamnye. I-ASCII okanye iKhowudi eMiselweyo yaseMelika yoTshintshiselwano ngoLwazi yinkqubo yekhowudi enika ikhowudi kubalinganiswa abangama-256 ababodwa. Ukufaka ngokufanelekileyo aba bantu, Qinisekisa ukuba iNts Lock iyasebenza, kwaye cinezela iqhosha le-alt kwaye faka ikhowudi kwiphedi yenani kwicala lasekunene . Kwiilaptops ngaphandle kwenombolo, unokufumana ukongezwa. Nalu uluhlu lweekhowudi ze-ASCII zee-alphabhethi ezibalulekileyo ezinamakhonkco.
IKHODI YASCII UMDLALO ONGENAYO
Q1. Ndizichwetheza njani iiakhawunti kwikhibhodi yeWindows?
ukuba wenze ntoni ngaphambi kokuphucula ukuya kwiwindows 10
I-Accents kwikhibhodi yeWindows inokufikeleleka kusetyenziswa iindlela ezininzi. Enye yeendlela ezilula kakhulu zokuchwetheza abalinganiswa abagqithisileyo kwizicelo zeMicrosoft kwiPC kukusebenzisa ulawulo olukhethekileyo olwabiwe nguMicrosoft. Cinezela i-Ctrl + `(ingcwaba eligxininisayo) + ileta ukufaka iileta ezinamangcwaba egxininisayo.
Umbuzo Ndichwetheza njani è kwikhibhodi yam?
Ukuthayipha è, yenza le ndlela imfutshane yekhibhodi: Ctrl + `+ + e. Umntu oqaqambileyo è uya kubonakala kwi-PC yakho. Ukongeza, unokucinezela kwakhona Ctrl + ‘ emva koko, emva kokushiya zombini izitshixo, Cinezela e , ukufumana i-accented é.
Indlela yokucima amagama afundwayo kwikhibhodi yakho kwi-Android
Iindlela ezi-3 zokususa uphawu lweParag (¶) kwiLizwi
Uyilungisa njani impazamo yokuFikelela kuDrayivu kuGoogle
Ungazidibanisa njani ezimbini okanye nangaphezulu iikhompyuter kwiMonitor enye
Abalinganiswa abanegama elichanekileyo kudala belahleka kwizicatshulwa ixesha elide, ikakhulu kuba kunqabile ukuba zisetyenziswe ngesiNgesi kodwa nangenxa yokuba zinobuqhetseba ukuzenza. Nangona kunjalo, ngamanyathelo akhankanywe apha ngasentla, kuya kufuneka ubenobugcisa kubalinganiswa abakhethekileyo kwiPC.
Siyathemba ukuba esi sikhokelo siluncedo kwaye nibe nako Chwetheza abalinganiswa abagqithisileyo Windows 10 . Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, yibhale phantsi kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi, kwaye siya kukunceda.
iinethiwekhi ze-wifi ezingabonisi windows 10
qala imenyu kunye nomda ungasebenzi
windows 10 ayiphenduli emva kokuqalisa
Inkqubo yenkonzo ngaphandle kweewindows 8.1 fix
phumelela i-wifi eyi-10 igcina ngokunqamka
ujonga njani isantya sedrayivu enzima